Safal Khabar - भारतको ‘भ्रम’ : काली उहीं छ, नक्साबाट नाम मात्र झिकियो
शनिबार, ०७ मङि्सर २०७६, ०७ : २२
काठमाडौं । नेपालमा चर्को विवाद भएपछि भारतले नक्सा तत्काल संशोधन गर्दै अर्को भ्रम छरेको छ। कात्तिक १५ गते जारी नक्सामा काली नदी भारतमा प्रस्ट देखिएपछि विवाद बढेको थियो। यो साता बनाएको अर्को नक्सामा काली नदी त्यहीँ छ, मात्र नाम झिकिएको छ (हेर्नुहोस् २ फरक नक्सा)।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर काली नदी गायब पारेको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भारतले काली नदी पुनः गायब गरेको बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
#भारत #नक्सा #काली नदी
शनिबार, २२ चैत २०७६, १० : ४५ मा अद्यावधिक गरिएको
भारतले नयाँ नक्सामार्फत काली नदीको ऐतिहासिकता स्वीकार गरेको छ। उसले सन् १८५० आसपासदेखि कृत्रिम काली...
सत्तासीन दलकै सांसदले नेपाली भूमि रक्षाका लागि...
भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसहित लिपुलेकको भूभाग गरी तीन...
१. भारतको विभिन्न शहरबाट फकिएका ९ जनामा गरिएको कोरोना परिक्षणको नतिजा नेगटिभ
२. बहराइनमा ९ नेपालीलाई कोरोना संक्रमण
३. प्रशासकीय अधिकृत नै क्वारेन्टाइनमा बस्न न्नमानेपछि...
४. भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएकी युवतीको नतिजा नेगेटिभ
५. अमेरिकामा एकै दिनमा कोरोनाले १ हजार ४ सय जनाको ज्यान लियो
६. फेरि लकडाउन समय थप्न सुझाव
७. सरकारकै संरक्षणमा मौलाउदैं भ्रष्टाचार, आफुखुसी ठेक्का
८. कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ५९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
९. फोब्र्सको सूचीमा परेकी गल्फ खेलाडी प्रतिमा भन्छिन्, ‘कोरोनाले खुशी साँट्नै पाइनँ’